Blog | WOWOW qasabadaha
Tubooyinka Musqusha ee ugu Fiican 2021 - Faallooyin iyo Hagaha Iibka
2022 / 01 / 20 488
Tubooyinka Musqulaha ee ugu Fiican 2021 - Dib u eegis iyo Hagaha Iibka Haddii aad dhisayso guri cusub ama aad qurxinayso musqushaada, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso inaad rakibto qalabka musqusha ee cusub. Marka ay timaado b...
Yaa Sameeya Tubooyinka Trustmi - Miyay Ku Fiican Yihiin Tayada
2022 / 01 / 17 1056
Yaa Sameeya Tubooyinka Trustmi - Miyay Tayada ku Fiican Yihiin Sida mid ka mid ah noocyada tubooyinka ugu caansan Ameerika, shirkadaha Trustmi waxay bixiyaan wax kasta oo celcelis ahaan mulkiilaha gurigu ka rabo ...
Yaa Sameeya Tubooyinka Soka - Dhammaan waxa ku saabsan Soka Brand
2022 / 01 / 17 1006
Yaa Sameeya Tubooyinka Soka - Dhammaan wixii ku saabsan Soka Brand Marka ay timaado summada qasabadaha, Delta, Moen, Pfister, Kohler ayaa had iyo jeer maskaxdeena ku soo dhaca. Waxaa ka mid ah, qasabadaha Soka waxay noqdeen doorashada jikada...
Sidee Loo Nakhshadeeyaa Gole Cidhiidhi Ah Oo Ku Yaalla Geeska Washinka Washinka 10cm?
2022 / 01 / 17 1013
Sidee Loo Nakhshadeeyaa Gole Cidhiidhi Ah Oo Ku Yaalla Geeska Washinka Washinka 10cm? Marka ay timaado kaydinta musqusha, waxaan inta badan ka fikirnaa oo kaliya armaajooyinka musqusha iyo meelaha la isku qurxiyo. Laakiin naqshadeeyayaasha xirfadlayaasha ah waxay leeyihiin wax badan ...
Waan Ka Qoomameeyay Ku-Rakibaadda Kuleyliyaha Sagxada Hoose ee Qolka Qubayska, Waxaan Ogaaday inay Aad U Naxdin Badan Tahay Kadib Markii Aan Soo Galay!
2022 / 01 / 17 1137
Miyaan ku rakibaa kuleyliyaha sagxada hoostiisa musqushayga? Dad badan ayaa laga yaabaa inay la halgameen arrintan. Inkasta oo ay jiraan siyaabo badan oo loo kululeeyo, raaxada ay keento kuleylka dhulka hoostiisa ayaa ka xoog badan. ...
Biyo-mareenka Dabaqaha Si Wanaagsan Loo Naqshadeeyay ee Qolka Musqusha ayaa si Wanaagsan u biya shubaya oo isna u muuqda mid Wanaagsan!
2022 / 01 / 16 1168
Musqusha waa meel bannaan oo biyaha inta badan lagu maydho iyo dharka lagu dhaqo. Haddii biya-mareennada aan si habboon loo samayn, markaas waxay noqon doontaa meel yar oo saxan u eg. Tani waxay ka dhigeysaa in aysan ahayn kaliya ...
Sida Loo Xaliyo Dhibatooyinka Qoyaanka, Madaw iyo Urta ee ceebta leh ee ka jira qolalka musqusha ee aan daaqadaha lahayn?
2022 / 01 / 16 1081
La'aanta hawo-mareenka dabiiciga ah ee musqulaha aan daaqadaha lahayn ayaa inta badan lala xiriiriyaa tiro dhibaatooyin ah, sida iftiin la'aan, qoyaan iyo ur xun. Ma aha oo kaliya in dhibaatooyinkani ay si toos ah u saameeyaan th...
Heerarkan gudaha qolka musqusha, haddii qolkaagu musqusha ka helo wax ka badan 4 shay, ku xisaabi ilaa heer.
Dadku waxay inta badan ahmiyad weyn siiyaan bay'ada qolalka ay ku nool yihiin iyo qolalka hurdada ee guriga. Jawi nololeed oo raaxo leh ayaa keeni karta niyadda wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, musqusha waa yar yahay, ayaa leh wax badan ...
Qolka musqusha Yar ee 2 M² sidoo kale ma kala saari karaa qoyan iyo qallayl?
Ma garanayo sababta, laakiin bulshooyin badan ayaa waayadan dambe, haddii ay yar yihiin ama ha yara weyn yihiin, horumariyayaashu waxay ka dhigeen musqusha mid aad u yar. Dad badan ayaa naftooda u maleeya inay noqon lahayd...
Musqusha ≠ Musqusha… Sannadahan oo dhan waa lagu khaldamay!
2022 / 01 / 13 536
Ka fakar Weligaa ma ku dhacday xaalad - Weligaa miyaad ku degdegtay inaad suuliga isticmaasho subaxdii, laakiin qof ayaa ku jira qubayska oo ka soo bixi maayo? – Kadib...
Inta badan ee qubeyska uu leeyahay, ayaa ka wanaagsan? Khubaradu waxay yiraahdeen……
2022 / 01 / 10 1130
Maalmahan, dadku aad iyo aad bay uga welwelsan yihiin caafimaadkooda. Xitaa madaxyada qubayska hadda waxay leeyihiin shaqada duugista, taasoo ka dhigaysa qalab caafimaad leh. Marka aad iibsanayso qubeyska, macaamiil badan ayaa qaladka
Waa maxay sababta qasabadaha wanaagsan ay qaali u yihiin? Isticmaal xogta si aad runta kuugu sheegto ……
Labaduba waa isku tuubo, maxay qaar 300 RMB ku kacayaan kuwa kalena 30 RMB kaliya? Markaad kala baxdo, qaabaynta qaabdhismeedku maaha mid adag. Kaliya waa qalab loogu talagalay getti ...